नचाउँदै चेपाङ गायक – Famous Nepal
03:17: AM Saturday December 16, 2017
नचाउँदै चेपाङ गायक
कार्तिक १३, २०७४-राक्सिलोहाङ वेराती तुङचु गदरी,
निक्तोमार सररर प्याङचे ल्यामसै आल्च मनहरी…
चेपाङ गीतका उपर्युक्त पंक्तिले भन्छन्— सालको पातमा बेरेर बिडी खाउँला, चिसो हावा खानलाई मनहरी जाउँला… । यही गीत गाएर गायक रविनकुमार चेपाङले राक्सिराङ गाउँपालिका–५ चैनपुरवासीलाई नचाए ।
उनको गायकीलाई गाउँलेहरूले यसरी साथ दिए कि सबै जना उठेर नाच्न थाले । चेपाङहरूको बाहुल्य रहेको राक्सिराङमा आफ्नै समुदायको गायकले स्टेज तताउँदा संगीत पारखीहरू खुसी नहुने कुरै थिएन । ‘द स्टार युथ क्लबले शुक्रबार गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान कार्यक्रममा रविनले यसपछि ‘हेटौंडामा साइँली…’ गाए । डेढ दशकदेखि गीत गाउँदै आएका रविनले ‘सान्नानीले झुक्यायो मलाई…’ गाउँदा पनि दर्शक/स्रोताले उत्तिकै साथ दिए ।
‘भूकम्पले घर भत्काए पनि स्वर भत्काउन सकेन,’ उनले भावुक भएर भने, ‘त्यसैले गीत गाएर हिँडिरहेको छु ।’ मकवानपुरकै युवा गायकको रूपमा छवि बनाउँदै आएका उनी भूकम्पपछि उनी सिरेटो छिर्ने कटेरामा बस्दै आएका छन् । रेडियो नेपालबाट २०५७ सालमै स्वर परीक्षण उत्तीर्ण गरेका रविनलाई मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा हुने जुनसुकै सार्वजनिक कार्यक्रममा निम्तो आउँछ ।
कार्यक्रममा चेपाङ किशोरीहरू तामाङ लोकलयमा गीत गाउँदै नाच्न पनि भ्याए । मेलिना चेपाङले ‘गुनियो चोलीमा राम्रो देखियो…’ बोलको गीतमा गरेको नृत्य पनि प्रसंशायोग्य थियो । राक्सिराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले चेपाङ समुदायको कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । गाउँपालिकामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी चेपाङ समुदायको बसोबास छ ।
विवाहपछि खुसी रहन चाहानुहुन्छ ? अब यी तरिकाहरु अपनाउनुहोस्
धेरै नेपालीले बिहेका लागि मंसिर महिना कुरेर बसेका हुन्छन् । यसै पनि मंसिर लगनको महिना हो । मंसिर सुरु भएसँगै…
कार्तिक १२, २०७४-शुक्रबार साँझ वीरगन्ज नजिकको पर्सागढी नगरपालिकास्थित एक पुरानो हवेलीको आँगनबाटै अभिनेत्री आँचल शर्मा अपहरणमा परिन् । सेतो पिकअप…
कार्तिक २३, २०७४-बुधबार युट्युब नेपालको ट्रेन्डिङ लिस्टमा फिल्महरूको वर्चस्व रह्यो । ट्रेलर , टिजर, गीत र सिंगो फिल्म नै ट्रेन्डिङमा देखिए…
हलमा राष्ट्रगान किन ?
कार्तिक १२, २०७४-बलिउड अभिनेत्री विद्या बालनले फिल्म हलमा राष्ट्रगान बजाउने नियम वाहियात भएको बताएकी छन् । भारतीय अदालतले शनिबार यस्तो…
फाटेको जुत्ता जस्तै छ आम नेपालीको जिन्दगी’
कार्तिक १३, २०७४-‘मलाई बोल्न हैन, अभिनय गर्न मन लाग्ने हो । कोही धेरै बोल्छन् तर म सक्दिनँ । सबैको आफ्नो(आफ्नो…